Dhismayaal Ganacsi oo ku yaal suuqa Bakaaraha Dab qabsadey Maanta.
Dagaal Culus Kana Dhacey Gobolka Bakool oo Faah Faahino Dheeraad ahi Kasoo Baxayaan.
SHariif Xasan Sheekh Aadan oo Sheegey in uu Jiro Qorshe AL-shabaab looga Saarayo Deegaanada K/galbeed.
Xaruntii dhismaha wasaaradda Maaliyadda oo maanta dib xarigga looga jarey.
Nabadda Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan oo Madaxda Itoobiya iyo Kenya Sheegeen in ay Doonayaan.
Raysul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa isniintii soo gabagabeeyay laba maalmood oo booqasho rasmi ah oo uu ku tagay dalka Kenya isagoo mudadaasi aqalka madaxtooyada Kenya ee Nairobi kulamo kula qaatay madaxweeynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Kulamadooda ayay diiradda ku saareen xiriirka labada dal ka dhexeeya ee dhinacyada ammaanka,...
Maamulka Koonfur Galbeed oo Faah Faahin ka Bixiyey Dilka Xildhibaanad Barlamaanka Ka Tirsaneyd.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixiyay dil magaalada Muqdisho loogu geystay xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka maamulka oo lagu magacaabi jiray Ruqiyo Xasan Abshir (Gabbane). Dabley hubeysan ayaa fiidnimadii xalay waxa ay xildhibaanada ku dileen gudaha Farmashiye ku yaalla Xaafadda Suuqa Cawska oo aanan sidaa uga fogeyn isgoyska...
Xukuumadda Soomaaliya oo Sheegtey in Gudiga Musuq Maasuqa la hor geyn Doono Barlamaanka Federaka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kormoor shaqo oo uu ku tagey xafiiska Hanti-dhowrka guud ee qaranka ka sheegay in Xukuumaddu ay xooga saareyso la-dagaalanka musuq-maasuqa, maadaama barnaamijka dawladda ay ugu muhiimsan tahay isla-xisaabtanku. Ra’iisul wasaaraha oo la hadlayay Hanti-dhowrka guud ee Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali (Afgooye) iyo hawl-wadeenadiisa...
Fiiro gaar ah oo loo yeelanayo Ciidamada AMISOM iyadoo Askari uga dhimanayaan Soomaaliya.
Dhug gaar ah ayaa loo yeelanayaa il gaar ahna waa lagu eegayaa taliyeyaasha AMISOM ayadoo ciidamo badan uga le'anayaan Soomaaliya ciidamada hawlgalka AMISOM. Waa faalo lagu qoray maanta bogga wararka ee wargeyska Daily Nation ee Nairobi kasoo baxa. Ciidamada KDF taliyeyaashooda sarsare ayaa il gaar ah lagu eegayaa kadib weerarkii labaad...
Ciidamada dalka Brundi ee qeybta ka ahaa AMISOM oo la filayo in ay ka baxaan Amisom.
Ciidamada Burundi ee qeybta ka ah hawlgalka AMISOM ayaa laga yaabaa inay isaga baxaan AMISOM bacdamaa aysan helin wax mushaar ah muddo dheer. Dhanka kale ayaa waxaa dawlada Burundi ay sheegtay in wax xilal ah oo dhanka hoggaaminta ah ciidamadeeda loo diiday. Labo waziir oo dawlada Burundi ka tirsan ayaa...
Gobolada dalka Itoobiya oo dhamaantood xukuumada dalkaasi sheegtey in amnigooda la adkeynayo.
Dawlada itoobiya ayaa shaacisay in ay ciidamo badan u direyso dhammaan gobolada dalkaa. Ciidamadaa ayaa xoojinaya xaalad deg deg ah oo dalkaa lagu soo rogay shalay kadib markii loo caal waayay mudaaharaadyo rabshado watay oo dalkaa ka dhacaayay in dhawaale. Dad badan ayaa ku naf waayay rabshadaha halka hanti badana...
Maamulka Hirshabeele oo warsaxaafadeed kasoo saarey xubnaha Aqalka sare.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr Cali C/llaahi Cosoble oo ka hadlayay hoolka doorashada aqalka sare magaalada Jowhar ee lagu doortay xubnaha aqalka sare ku matalaya dowlad goboleedka Hirshabeelle Jamhuuriyadda Soomaaliya taasi uu ku tilmaamay guul taariikhi ah iyo tilaabo horey loo qaaday. Dr Cali C/llaahi Cosoble Madaxweynaha Dowladda Hirshabeelle ayaa...
Gobolka SH/Hoose Duqeymo ka Dhacey oo Mareykanku Warbixin kasooSaartey,dhimashada iyo khasaaraha ay gaysteen.
Mareykanka ayaa War ka soo saaray gaari yar oo nooca raaxada ah oo habeenkii Khamiista aheyd lagu duqeeyay degaanka Xaawa Cabdi oo ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho. Mareykanka ayaa sheegay in uu duqeyn ku dilay Afar ka tirsanaa xoogaga Ururka Al-Shabaab, islamarkaana uu burburiyay gaari ay walaxaha Qarxa saarnaayeen oo...
Muwaadiniin Soomaali ah oo dalka Norway uu kala laabtey Bassaporka dalkaasi.
Tiro Muwaaddiniin Soomaaliyeed ah oo Dalka Norway galay sannadihii 1990-kii illaa 2000, ayay Xukuumadda Norway waxay si Rasmi ah ugala laabatay Sharciyadii degenaashaha dalkeeda, iyadoo kuwo kalena loo diiday inay mar kale u cusbooneysiiso sharciyadii ay ku deggenaayeen Waddankeeda. Xukuumadda Norway, ayaa sheegtay in Tallaabadan ay qayb ka tahay Qorshayaasha...
Afurinta 1.1 million oo ay ku dhawaaqdey Wasiiradda Gargaarka Maryan Qaasim.
Wasiirka Gargaarka Iyo Maareynta Musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Maryan Qaasim, ayaa maanta oo jimca ah daahfurtay mashruuc cusub oo la doonayo in lagu afuriyo 1.1 million oo Soomaali oo ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Wasiiradda ayaa sheegtay in howsha inteeda badan laga fulin doono goobaha ay saameyeen abaaraha ee gudaha dalka...